Horudhac: Leicester City vs Chelsea… (Blues oo booqanaysa King Power xilli ay maanka ku hayso inay soo yareyso dhibcaha kaalinta saddexaad ee Foxes) – Gool FM
(London) 01 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa soo dhoweynaysa naadiga Chelsea kulan ka tirsan horyaalka Premier League galabta oo Sabti ah, waxaana ay eegeysaa inay ka soo kabato niyad-jabkii ka soo gaaray inay seegeen inay u soo baxaan Final-ka EFL Cup kaddib markii ay khasaaro kala kulmeen Aston Villa.
Markii ay ku guuldarreysteen inay guul gaaraan labo kulan oo ciyaaraha sare ee horyaalka ah, Blues ayaa u safreysa garoonka King Power, iyadoo eegeysa inay soo yareyso farqiga dhibcaha horyaalka Premier League ee u dhexeeya iyaga iyo Kooxda kaalinta saddexaad ee Foxes oo ah shan dhibcood.
Garsooraha: Lee Stephen Mason (England)
Tababaraha Kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa la soo sheegayaa inaysan kooxdiisu la dhibtoonaynin wax dhaawacyo cusub ah.
Gooldhaliyaha sare ee Foxes, Jamie Vardy ayaa kulankan diyaar u ah, isagoo badal ku soo galay bartamihii isbuuca, inkastoo dhibaato dhawaanahan uu sheeganayey, laakiin Wes Morgan iyo Nampalys Mendy ayaa weli dhaawac ku maqan.
Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa shaki laga galinayaa kulankan kaddib dhaawac canqowga ah oo uu qabo, waxaana uu goor dambe wajahayaa tijaabo taam ahaanshihiisa la xiriirta.
Laacibka khadka dhexe ee Blues, Ruben Loftus-Cheek iyo garabka kooxdaas ee Christian Pulisic ayaa weli garoomada ka maqan.
>- Leicester City ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay wajahday Chelsea, waxaana ay ka haysataa 1 Guul iyo 3 Barbaro, waana heerkoodii ugu fiicnaa tan iyo markii ay shan kulan guuldarro la’aan ahaayeen intii u dhaxaysay bilihii April sanadkii 1999-kii iyo Febraayo 2001-dii.
>- Chelsea ayaa guuleysatay shan ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay booqdeen (Away) isla markaana ay wajaheen Leicester, labada kulan ee kalena mid barbaro ayay galeen midka kalena waa laga adkaaday, guuldarrada kaliya ee ka soo gaartay waxa ay ahayd intii lagu guda jiray markii ay Leicester horyaalka qaaday bishii December sanadkii 2015-kii.
>- Ma jirto koox guulo badan horyaalka Premier League ka soo heshay Leicester City oo ay ku booqatay garoonka King Power Stadium ee ka badan Chelsea oo la mid ah Liverpool iyo Spurs oo min 4 goor ka soo adkaaday Dawacooyinka iyagoo marti ah kulammada horyaalka.
>- Kooxda gurigeeda ku ciyaareysa ayaan guuleysanin lixdii kulan ee ugu dambeeyey Premier League ee dhexmaray Leicester iyo Chelsea, waxaana ay la kulmeen 3 barbaro iyo 3 Guuldarro, markii ugu dambeeyey oo ay gurigooda guul ku gaaraan waxay ahayd intii lagu guda jiray bishii October sanadkii 2016-kii, markaasoo ay Chelsea 3-0 ku adkaatay iyadoo lagu dheelayey garoonkeeda Stamford Bridge.
>- Leicester ayaa guuldarro la kulantay labo ka mid ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka Premier League ku ciyaartay garoonkeeda, inkastoo ay 4-1 kaga adkaadeen West Ham markii ugu dambeysay, The Foxes ayaana hal goor khasaaro la kulantay 15-keedii kulan ee markaas ka hor ay ku ciyaartay garoonkeeda King Power Stadium (11 Guul iyo 3 Barbaro).
>- Laga bilaabo lixdoodii kulan ee ay martida ahaayeen horyaalka xilli ciyaareedkan, Chelsea ayaa ku guuleysatay 15 dhibcood 18 dhibcood oo suuro-gal u ahaa inay qaadato, waxaana ay la kulantay (5 Guul iyo 1 Guuldarro).
>- Macallinka Leicester ee Brendan Rodgers ayaa wajahaya Chelsea markiisii 13-aad ee xirfaddiisa tababarenimo, mana jirto koox ka badan oo uu wajahay, si kastaba ha noqotee, waxa uu guul la’aan yahay dhammaan 13-kiisii kulan ee uu wajahay The Blues (7 Barbaro iyo 6 Guuldaro ayaana ka soo gaartay), kooxda kaliya oo guuldarro ka badan uu kala kulmay waa Manchester United oo uu 9 guuldarro kala kulmay.
>- Xiddiga kooxda Leicester ee Harvey Barnes ayaa dhaliyey goolal kulamo isku xiga horyaalka Premier League, isagoo shabaqa soo taabtay labo goor 39-kiisii kulan ee hore tartankan, weligiis ma dhalin gool saddex kulan oo xiriir ah kulammada horyaalka marka uu la ciyaarayo afarta kooxood ee sare kubadda cagta Ingiriiska.